नेपाल आज | रवीन्द्र मिश्रले मेराे बारेमा गलत कमेन्ट गर्नु भयाे, तर मेराे भाेट उहाँलाई नै हाे (भिडियोसहित)
अन्तरवार्ता भिडियो इतिहास र अनुभुति
रवीन्द्र मिश्रले मेराे बारेमा गलत कमेन्ट गर्नु भयाे, तर मेराे भाेट उहाँलाई नै हाे (भिडियोसहित)
शनिबार, ०९ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
काठमाडौं । डा. सुरेन्द्र केसी नेपाली राजनीतिलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्नु हुन्छ । नेपालआज डटकममा नियमित भिडियो स्तम्भ ‘इतिहास र अनुभूति’ मा डा. केसीले आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्नु हुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँगको पछिल्लो कुराकानीको मूल सार :
‘म रसिया भ्रमणमा गएको बेला मेरो नाम उद्धृत गर्दै एक खालको चर्चा भएछ नेपालमा । त्यो चर्चा के भने नेपाललाई भारतमा मिसाउदा के हुन्छ ? भन्ने अभियान बिबिसीमा रहँदा रवीन्द्र मिश्रले चलाएका हुन् भन्नेबारे । यो विषयबारे कसैले स्पष्ट पारेनन् । कतै मेरो नाम नै लिएर कतै अप्रत्यक्ष एक प्रोफेसरले भनेको भनेर चर्चाहरु भएछ । खासमा मैले यसबारे बोलेको चाहिँ हो । वास्तविकता के हो भने एक वर्षअगाडि सगरमाथा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदा यो कुरा मैले बोलेको थिएँ । कुराकानीको अन्त्यतिर हठात यस्तो प्रश्न मलाई गरियोे । र मैले भनेँ कि– बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्दा के हुन्छ ? भने जुन प्रश्न सोध्यो, त्यो आपत्तिजनक थियो ।
बिबिसीले त्यस्तो कुकर्म गरिरहँदा रवीन्द्र मिश्रको भूमिका के थियो ? त्यो बेला उनले के गरे
मैले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा यही हो । त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि युट्युवमा हेर्दा हुन्छ । सत्य कुरा नखोज्ने, रे का भरमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु ठिक हुँदैन । त्यही कुरा एक मतदाताले रवीन्द्र मिश्रलाई पनि सोधेछन् । अनि रवीन्द्र मिश्र जस्तो पढेलेखेको, देश दुनियाँ बुझेको मानिसले दिएको जवाफ पनि अशोभनीय छ । कसैले एक प्रोफेसरले यसो भन्नु भयो रे नि भन्दा मिश्र पनि विश्वास गरेर उफ्रिनु भएछ । प्रोफेसरले भनेकै हो कि होइन भन्ने स्पष्ट नभई उहाँले भन्नुभयो कि, उहाँ कस्तो प्रोफेसर, उहाँले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान् ?
यस तरिकाले यस विषयमा रवीन्द्र मिश्र चिप्लिनु भएको छ । उहाँले त मेरो क्षमता, दक्षतामै प्रश्न उठाउनु भएको छ । मेरा २५ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । जसमा आधा जति त अनुसन्धानमा आधारित छन् । १ हजार लेख लेखेको छु । जसमा आधा त अनुसन्धानमा आधारित छन् । १५ सय वटा अन्तर्वार्ता दिएको छु । यसमा कहीँ न कहीँ ‘क्रेडिबिलिटी’ छ ।
म अहिले पनि रवीन्द्र मिश्रसँग यस विषयमा बहस गर्न तयार छु । बहस चाहिँ नगर्ने, अनि कुरा नबुझी हावाको भरमा बोल्दै हिँडेर हुन्छ ?
म आफूले बोलेका कुरामा स्पष्ट छु । रवीन्द्र मिश्रबारे निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएको छैन । म खुला बहस गर्न नै तयार छु भनेपछि सक्किगयो । अर्को कुरा के भने मैले रवीन्द्र मिश्रको नचाहिँदो आलोचना चाहिँ किन गर्दै हिँड्नु छ र ? यो गर्नु मलाई आवश्यक छैन । जहाँसम्म उहाँको जुन अभियान छ त्यो अभियानको म आफै पनि समर्थक हो । यो देशको राजनीति सफा छैन भन्ने कुरामा मैले जति बोलेको अरु कसले होला र ? त्यसमाथि रवीन्द्र मिश्र मेरै क्षेत्रको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ ।
मैले आजसम्म गुण र दोषका आधारमा भोट दिँदै आएको छु । पहिले माओवादीलाई दिएँ । केही गर्ला भन्ने आशा थियो । त्यसपछि गणेशमानका छोराका नाममा प्रकाशमानलाई भोट हालेँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विद्यासुन्दर शाक्यलाई दिएँ । अहिले पश्चाताप भयो । मैले त आगामी पाँच वर्षपछि पनि एमालेलाई भोट नहाल्नु भनिसकेको छु । विद्यासुन्दरकै कारण यसो भनेको हो मैले ।
अब यसपटक मेरो क्षेत्रबाट उठेका रवीन्द्र मिश्रलाई भोट हाल्न सक्छु । मेरो कुनै रिजर्भेसन छैन । म किन रवीन्द्र मिश्रलाई भोट हाल्छु भने उहाँले जे आवाज उठाइरहनु भएको छ, त्यो आवाज संसदमा पुग्छ । यसकारण पनि म मिश्रलाई भोट हाल्छु । तर मलाई आश्चर्य लाग्छ कि रवीन्द्र मिश्र नै मेरो बारेमा अनेकन कुरा गर्दै हिँड्नु हुन्छ । उहाँ आफैले मलाई सोधे हुँदैन र ? मलाई नसोध्ने मेरो बारेमा भन्दै हिँडेको देखेर आश्चर्य लागेको छ ।
रवीन्द्र मिश्रका बारेमा अरु कुरा पनि छन् । म उहाँलाई च्यालेन्ज नै गरेर भन्छु, युकेमा उहाँले मनोज पण्डितलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभयो ? उहाँले राम्रा मान्छे कतिलाई एक्स्पोजर दिनु भयो ? म आफै चीन जाँदा बेइजिङमा फिक्स भएको मेरो रेडियो अन्तर्वार्ता लीलामणि पौडेलले भाँडिदिनुभयो । यस्ता त छन् नेपालका मान्छे ।’
Dr. Surendra KC